Maxamed Saalax oo Amar WAALI ah hordhigay Xiriirka Masar iyo Jawaab KULUL oo la siiyay!!!…(Sheekada oo meel xun mareysa) – Gool FM
Maxamed Saalax oo Amar WAALI ah hordhigay Xiriirka Masar iyo Jawaab KULUL oo la siiyay!!!…(Sheekada oo meel xun mareysa)
(Egypt) 02 Sab 2018. Sheekada Maxamed Saalax iyo xiriirka kubbada cagta dalka Masar ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano EFA ayaa meel xun mareysa.
Xiddiga Liverpool ayaa la warinayaa inuu maamulka sare ee Xiriirka ka dalbay inay is casilaan dhammaantooda ama ay meel ka saaraan Taageerayaasha saqdii dhexe albaabka u soo garaacaya kuwaa oo waydiisanaya Sawirro iyo saxiixiisa inta uu gudanayo waajibaadka xulka.
Maxamed Saalax oo kaalinta saddexaad ka soo galay laacibka Sanadka ee Yurub ayaa warqad u gudbiyay xiriirka kubbada cagta ee Masar taa oo wax looga qabanayo amnigiisa iyo taageerayaasha sida joogtada ah albaabka ugu soo garaaca xitaa habeen barkii.
Yeelkeede, Saalax ma helin jawaabtii uu sugayay oo mid kulul ayuu xiriirka Masar ugu soo jawaabay.
Waxaa lagu war galiyay inuusan fadli dheereyn ciyaartoyda kale isla markaana aan loo sameyn doonin wax gaar ah oo aan loo sameyn ciyaartoyda kale ee xulka.
Warqad uu soo saaray xiriirka kubbada cagta dalka Masar ayaa lagu sheegay in ciyaartoyda xulka loola dhaqmayo si caddaalad ah oo isku mid ah isla markaana aysan jirin laacib si gaar ah loo in jecleysan doono.
Leroy Sane Shalay wuxuu ahaa Xiddiga Goobta Maantana..
Alexandre Lacazette oo Guul ku Hogaamiyay Arsenal kulankii ay u Martiyeen dhigeeda Cardiff City+SAWIRRO